Anthony Martial oo si cajiib ah yeelay tintiisa & Fal-celintii laga sameeyey Sawirrada layaabka leh ee laga soo bandhigay! – Gool FM
(Manchester) 24 Mar 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester United ee Anthony Martial ayaa sida muuqata qaab cusub oo aan horay looga baran yeelay timihiisii.
Xiddigan reer France ee Anthony Martial ayaa isagoo u muuqda mid timaha madaxiisa wada xiiray ka soo dhinac muuqday qoyskiisa.
Fal-celintii Sawirradiisa looga sameeyey baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka ayaa muujinaya in Weeraryahankan Man United ee Anthony Martial uu u ekaaday xiddigii reer Brazil ee Ronaldo Dalima.
Dhammaan kubadda cagta Yurub ayaa xanniban, waxaana xiddigaha iyo macallimiintu ay ku howllan yihiin inay waqtigooda meelo kale oo aan ahayn kubadda cagta ku bixiyaan, inta xal looga helayo caabuqa Coronavirus.
Muxuu yahay go’aanka ciyaartoyda Premier League-ga ay ka qaateen in taageere la'aan dib loo ciyaaro?